Xildhibaan Dhalxa oo ku jeesjeesay farmaajo”dagaalka uu farmaajo iclaameyey waa sida aroos la iclaamyey “ | Xaqiiqonews
Xildhibaan Dhalxa oo ku jeesjeesay farmaajo”dagaalka uu farmaajo iclaameyey waa sida aroos la iclaamyey “
Xildhibaan Max’med Cumar Dalxa oo kamid ah Baarlamaanka Dowladda Federaalka ayaa dhaliil kulul ujeediyay tallaabadii uu Farmaajo dagaalka ugu iclaamiyay Al Shabaab.
Max’med Cumar Dalxa ayaa tallaabada madaxweynaha la meel dhigay aroos la iclaamiyay kadibna durmar farabadan isugusoo aruureen goobta arooska isagoo ula jeedo in alshabab o dagaal loo iclaamiyaa ay la mid tahay dumar aroos loo iclaamiyey ! “Dowladdu sidii Aroos oo kale ayay dahaalka udigtay waxaaba la moodaa in ay dhahday kaalaya oo nasoo weerara”ayuu yiri Dalxa.
Xildhibaanka katirsan DF-ka ayaa meesha ka saaray wararka madaxda dowladda Federaalka ee ah in Al Shabaab la wiiqay islamarkaana laga hortagayo weeraradeeda “Al-Shabaab Ma Ahan Dad Wax Looga Qaadi Karo Hanjabaad Iyo Tuute La Xirto” ayuu yiri Dalxa.
HALKAN KA DHGEYSO WAREYSIGA XILDHIBAAN DALXA